२०२१ मेडिकल Statण तथ्याistics्क - एकलकेयर - कम्पनी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कल्याण कल्याण औषधि बनाम मित्र कम्पनी, समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी कम्पनी औषधि जानकारी, समाचार समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार
मुख्य >> कम्पनी >> २०२१ चिकित्सा debtण तथ्या .्क
चिकित्सा debtण अमेरिकामा बढ्दो समस्या हो, धेरै अमेरिकीहरूले वित्तीय अस्थिरता र दिवालियापनको अनुभव गरिरहेका छन्। २०१ 2016 कैसर परिवार फाउंडेशन र न्यू योर्क टाइम्स सर्वेक्षण अनुसार, in मध्ये १ भन्दा बढी अमेरिकीलाई भर्खरको मेडिकल बिल तिर्न समस्या भएको थियो। र जब चिकित्सा debtण ढेर हुन्छ, यसले कठिन वित्तीय निर्णयहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै खाना, कपडा, वा अन्य आधारभूत घरेलु चीजहरूमा कटौती गर्नु पर्ने।
जे होस् अप्रत्याशित घटनाहरू जस्तै अस्पताल बसाई ठूलै योगदानकर्ता हुन् (अमेरिकन जर्नल अफ मेडिसिन रिपोर्ट गर्छ कि लगभग आधा व्यक्ति जो मेडिकल दिवालियापन अनुभव गर्छन् अस्पताल बिलहरूको सब भन्दा ठूलो खर्चको रूपमा नाम लिन्छन्) , तर चिकित्सा सेवाको उच्च लागत पक्कै सहयोग गर्दैन। लिनु एउटा मात्र उदाहरण , संयुक्त राज्य अमेरिका मा औसत अस्पताल बस्न प्रति दिन $ 5,220 लागत - अष्ट्रेलिया मा मात्र $ 765 को तुलनामा। कुल मिलाएर, अमेरिकाले प्रति वर्ष care.। ट्रिलियन डलर स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्दछ ।
निम्न तथ्या्कहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा चिकित्सा debtण समस्याको दायरा प्रबुद्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
चिकित्सा ofण को वास्तविकता
मेडिकल debtण समस्याले जो कोहीलाई हडताल गर्न सक्छ: समस्या आयु समूह र शैक्षिक स्तरहरूमा कटौती गर्दछ। आर्थिक जिम्मेवार ठानिने व्यक्तिहरू समेत चिकित्सा debtणबाट प्रभावित हुन सक्छन्। चिकित्सा debtणको साथ आधा भन्दा बढी अमेरिकीहरूसँग तिनीहरूको क्रेडिट रिपोर्टमा अन्य debtsण सूचीबद्ध गरिएको छैन। चिकित्सा aloneण एक्लै यी व्यक्तिहरूको लागि घर किन्न वा क्रेडिट कार्डमा एक सभ्य दर प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ।
चिकित्सा दिवालियापनमा जाने व्यक्तिहरूको औसत आयु .9 44..9 वर्ष हो। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
मेडिकल दिवालियापन अनुभव गर्नेहरू मध्ये 46 46..3% विवाहित छन्। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
व्यक्ति जो एक मेडिकल दिवालियापन अनुभव, .3०..3% कलेजमा भाग लिए। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
चिकित्सा दिवालियापन फाइलरहरूको औसत मासिक घरेलु आम्दानी $ २,586 / / महिना हो। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
चिकित्सा दिवालियापन अनुभव गर्ने परिवारहरू मध्ये, २०.१% सैन्य परिवारहरू हुन्। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
मेडिकल दिवालियापन अनुभव गर्ने परिवारहरूका लागि औसत debtण $ ,$,6२२ हो। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्टको १ 19।।% मा एक वा बढी मेडिकल संग्रह सामेल छ। (उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो, २०१))
क्रेडिट रिपोर्टमा रेकर्ड गरिएको औसत अवैतनिक मेडिकल debtण $ 579 हो। (उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो, २०१))
संकलनमा debtsण सहित उपभोक्ताहरु को २२% मा मात्र चिकित्सा medicalण छ। (उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो, २०१))
मेडिकल debtण सहित consumers 54% उपभोक्ताहरूसँग उनीहरूको क्रेडिट रिपोर्टमा अन्य debtsण सूचीबद्ध गरिएको छैन। (उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो, २०१))
चिकित्सा ofण को मानवीय लागत
चिकित्सा debtण — र चिकित्सा debtणको डरले अमेरिकीहरूका लागि गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउँछ। सबै भन्दा ठूलो मुद्दाहरू मध्ये एक हो कि medicalणले मानिसहरूलाई चिकित्सा समस्याहरूलाई वेवास्ता गर्न सक्छ। करीव तीन मध्ये एक अमेरिकी भन्छन् कि उनीहरूले हेरविचार गर्नमा ढिलाइ गरे किनभने उनीहरू लागतको बारेमा चिन्तित थिए ।
कुनै पनि अन्य क्षेत्र मा, जब एक सेवा को लागी धेरै तिर्ने बारे मान्छे चिन्ता गर्छन्, उनीहरु वरपर किनमेल गर्न सक्छन्। तर अमेरिकनहरू जसले मेडिकल सेवाहरूको साथ यो प्रयास गर्‍यो उनीहरूसँग सँधै भाग्य हुँदैन। वयस्कहरू मध्ये जो भन्छन कि उनीहरूले किनमेल गर्न खोजे,%%% ले अनुभवलाई केही गाह्रो वा धेरै गाह्रो भने ।
१ 18-6464 वर्ष उमेरका २१% वयस्कले मेडिकल टेस्ट वा उपचार पार गरेका छैनन् जुन डाक्टरले सिफारिस गरेको लागतको कारण हो। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
१ 18-6464 उमेरका वयस्कहरूको २% ले लागतको कारण उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मेडिकल हेरचाह स्थगित गर्यो। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
१ 18-6464 उमेरका वयस्कहरूको %०% घरको उपचार वा ओभर-द-काउन्टर ड्रगमा निर्भर छन् डाक्टरमा जानुको सट्टा, लागतको कारण। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
१ 18-64 ages उमेरका वयस्कहरूको of 34% उनीहरूको चिकित्सकले उनीहरूलाई प्रक्रियाहरूको लागतको व्याख्या गर्दैनन्। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स, २०१))
वयस्कहरू जो भन्छन कि उनीहरूले बिभिन्न प्रदायकहरुमा वरिपरि शपिंग गर्न खोजेका थिए चिकित्सा सेवाहरु का लागी राम्रो मूल्य खोज्न को लागी,%%% को अनुभव केहि गाह्रो वा धेरै गाह्रो हो। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
मेडिकल बिल समस्या भएकाहरू मध्ये 44 44% भन्छन् ती समस्याले उनीहरूको परिवारमा ठूलो असर पारेको छ। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
मेडिकल बिल समस्या भएकाहरू मध्ये २% प्रतिशतले भने कि मेडिकल debtणको समस्याले गर्दा अन्य, गैर-मेडिकल बिल तिर्ने समस्या उत्पन्न भयो। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
Bill२% मेडिकल बिल समस्या भएकाहरूसँग स्वास्थ्य बिमा हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा भयो भने उपचार सुरु भयो। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
मेडिकल बिल समस्या भएकाहरूमा बिमा हुनेहरूमध्ये २ 26 प्रतिशतले उनीहरूलाई भुक्तानी गर्नमा समस्या भएको कारण तिनीहरूको दावीलाई अस्वीकार गरिएको बताएका छन। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
अन्ततः, मेडिकल बिलले दिवालिया हुनबाट जोगिनका लागि सीमित विकल्पहरूको साथ केही व्यक्तिहरूलाई छोड्न सक्छ। मेडिकल बिल समस्या भएका अमेरिकीहरू बीच:
% 53% भन्छन् कि उनीहरूले आफ्नो प्रदायकसँग भुक्तानी योजनामा ​​काम गरे।
% 37% भन्छन कि तिनीहरूले साथी वा परिवारबाट पैसा लिए।
% 34% भन्छन् कि उनीहरूले आफ्नो क्रेडिट कार्ड debtण बढाए।
%०% भन्छन कि तिनीहरूले खाना, कपडा, वा अन्य आधारभूत घरेलु चीजहरूमा खर्च कटौती गरे।
%१% भन्छन् कि तिनीहरूले थप काम लिए वा अधिक घण्टा काम गरे।
%%% भन्छन् कि तिनीहरूले अधिक वा सबै आफ्नो बचत प्रयोग गर्थे।
% 35% भन्छन् कि उनीहरू आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै खाना, तातो, वा आवासको लागि तिर्न असमर्थ छन्।
स्रोत: कैसर परिवार फाउंडेशन / न्यूयोर्क टाइम्स, २०१।
धेरै स्वास्थ्य उद्योग स्टार्टअपहरू, जस्तै सिंगलकेयर, कम चिकित्सा लागतहरूको लागि नवीन समाधानहरू पत्ता लगाउन काम गरिरहेका छन्। अमेरिकीहरू जसले यी नयाँ विकल्पहरूको फाइदा लिन्छन् तिनीहरूले चिकित्सा debtण नियन्त्रणबाट बाहिर जानबाट जोगाउन सक्छन्।
एन्टीबायोटिक पछि प्रोबायोटिक्स कती समय सम्म लिने
चिकित्सा debtणले चलिरहेको वित्तीय समस्याहरू पनि सिर्जना गर्न सक्दछ। संग्रहमा मेडिकल बिल सहित अमेरिकीहरू:
१%% भन्छन् कि तिनीहरूसँग १०,००० डलर वा सो भन्दा बढी owणी छन्।
% 33% भन्छन् उनीहरूसँग पनि विद्यार्थी loanण छ।
१%% भन्छन् कि उनीहरू पनि एक payday nderणदाता को moneyणी छ।
% 58% भन्छन् कि तिनीहरू एक संग्रह एजेन्सी द्वारा सम्पर्क गरीएको छ।
चिकित्सा medicalण के कारण हुन्छ?
सबै चिकित्सा खर्च debtण मा परिणत हुँदैन। र बिल आफैमा सधैं एक्लो समस्या हुँदैनन्। व्यक्ति जो बिरामी छन् वा बिरामी प्रियजनको हेरचाह गर्नुपर्दछ, कामबाट छुट्ने बित्तिकै उनीहरूको आम्दानी घट्न सक्छ। वास्तबमा, सातमा एक भन्दा बढी मेडिकल दिवालियापन बच्चाको रोगको कारण हो ।
सर्वेक्षणहरूको माध्यमबाट, अनुसन्धानकर्ताहरूले चिकित्सा debtण व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरे। यी अमेरिकीहरूको प्रतिक्रियाले गम्भीर वित्तीय तनाव निम्त्याउने सम्भावित वित्तीय र चिकित्सा अवस्था प्रकट गर्दछ।
.1२.१% जसले दिवालियापनका लागि फाइल गरेका मेडिकल बिल वा आय घाटा बिरामी वा हेरचाहको कारण आफ्नो बैंकरपरी को कारणको रूपमा पेश गरे। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
१ bank..6% मेडिकल दिवालियापन एक बच्चाको बिरामीको कारण हो। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
मेडिकल बिल समस्या भएकाहरू मध्ये १०% भन्छन् उनीहरूसँग बिल $ 500 भन्दा कम वा कम छ। (कैसर परिवार फाउन्डेशन / न्यू योर्क टाइम्स , २०१))
हालसालै गरिएको एउटा सर्वेक्षणले विशिष्ट servicesण सेवाहरूको पहिचान गर्‍यो जुन चिकित्सा debtणको लागि डोर्यायो। रिपोर्ट गरिएका सेवाहरू मध्येमा जसले मेडिकल बिलहरूको समस्या निम्त्यायो:
डाक्टर भ्रमण: % 65%
डायग्नोस्टिक टेस्ट: % 65%
आपतकालीन कोठा भ्रमण: %१%
बाहिरी रोगी सेवाहरु: %%%
प्रयोग शुल्क: % 64%
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लागत: %२%
नर्सिंग होम केयर वा दीर्घकालीन देखभाल: %%
दन्त चिकित्सा हेरचाह: %१%
बाल चिकित्सा सेवा: २%%
छोटो अवधि एकल अस्पताल रहनुहोस्: % 66%
अर्को अध्ययनले मेडिकल ofणका कारणहरूको बारेमा यस्तै प्रश्नहरू सोध्यो।
Bank 48% व्यक्ति जो मेडिकल दिवालियापनको नाम लिए अस्पतालको बिलहरु उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो खर्चको रूपमा अनुभव गरे। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
१.6..6% व्यक्ति जो मेडिकल दिवालियापन अनुभव गरे उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो खर्चको रूपमा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नाम दिए। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
१.1.१% व्यक्ति जो मेडिकल दिवालियापन का नाम डाक्टर बिल को सबैभन्दा ठूलो खर्च को रूप मा अनुभव गरे। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
Bank.१% व्यक्ति जो मेडिकल दिवालियापन अनुभव गर्छन् उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो खर्चको रूपमा प्रीमियम नाम दिए। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
मेडिकेली दिवालिया परिवारहरूको लागि बाहिरको जेब मेडिकल लागत $ १,, 43 .43 छ। ( अमेरिकी जर्नल अफ मेडिसिन , २००))
चिकित्सा लागत तथ्या .्क
चिकित्सा debtण को समस्या चिकित्सा लागत संग जोडिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वास्थ्य सेवामा यस्तै देशहरू भन्दा बढी खर्च गर्दछ, र यस लागतको बोझले अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा कटौती गर्दछ, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरूबाट ठूलो भुक्तानी आवश्यक पर्दछ।
यस लागतलाई असर गर्नु भनेको सरकारले शिक्षा र पूर्वाधार सुधारमा कम खर्च गर्नुपर्दछ। यसको मतलब व्यवसायलाई अनुसन्धान र विकासमा कम खर्च गर्नुपर्दछ। यसको मतलब अमेरिकी परिवारले कपडा र खानामा कम खर्च गर्नुपरेको छ।
र बोझ बढ्दै छ। को संयुक्त राज्य अमेरिकाले अब प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवामा प्रति व्यक्ति १०,००० अमेरिकी डलर भन्दा बढी खर्च गर्दछ , माथि बाट २०० in मा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष less 5,000 भन्दा कम ।
Pravastatin र atorvastatin बीच के फरक छ?
अमेरिकाले प्रति वर्ष care.$ ट्रिलियन डलर स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्दछ। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
संयुक्त राज्यले प्रति व्यक्ति on १०,739 health प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्दछ। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
स्वास्थ्य सेवा खर्च अमेरिकाको कुल घरेलू उत्पादन (GDP) को 17.9% को लागी खाता हो। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
अमेरिकीहरू निजी स्वास्थ्य बीमामा प्रति वर्ष १.१18 ट्रिलियन खर्च गर्छन्। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
अमेरिकीहरू year 55. billion अर्ब डलर खर्च गर्छन्-जेब मेडिकल खर्चमा। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
अमेरिकीहरू अस्पताल खर्चमा प्रति वर्ष १.१14 ट्रिलियन खर्च गर्छन्। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
निजी स्वास्थ्य बीमा खाताहरूमा U 34% का लागि कुल अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा खर्च खर्च गर्ने। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
जेब आउट खर्चमा खर्च गरीरहेको छ अमेरिकाको कुल स्वास्थ्य खर्चको १०%। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
अमेरिकीहरू चिकित्सक र क्लिनिकल सेवाहरूमा प्रति वर्ष44 .3..3 बिलियन खर्च गर्छन्। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
अमेरिकीहरू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्समा प्रति वर्ष 333..4 बिलियन डलर खर्च गर्छन्। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
परिवारहरूको कुल स्वास्थ्य सेवा खर्चको २%% छ। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
निजी व्यवसायहरूले स्वास्थ्य सेवा खर्चको १ .9.।% को हिस्सा लिएका छन्। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१ 2017)
औसतमा, एक अमेरिकी उमेर 65 65 र अधिक उमेरका लागि स्वास्थ्य सेवामा खर्च प्रति वर्ष १,, ० 8 is हो। (राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१))
औसत, एक कार्यरत उमेर अमेरिकी (१ 18-6464) को लागी स्वास्थ्य सेवामा खर्च प्रति वर्ष, ,,१33 छ। (राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१))
औसतमा, अमेरिकी बच्चा (०-१-18) को स्वास्थ्य सेवामा खर्च प्रति वर्ष 74 747474 is हो। (राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१))
औसतमा, महिलाहरूका लागि स्वास्थ्य सेवामा अमेरिकी खर्च प्रति वर्ष, ,,8११ छ। (राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१))
औसतमा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुरुषहरूको स्वास्थ्य सेवामा खर्च spending $,२72२ प्रति वर्ष हो। (राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यय डाटा, २०१))
चिकित्सा खर्च अमेरिकी संघीय बजेट को १.1.१% को लागी। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
मेडिकेड खर्च अमेरिकी संघीय बजेट को .5 ..5% को लागी खाता हो। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
स्वास्थ्य बीमाको लागत
धेरै व्यक्तिहरू स्वास्थ्य बीमामा भर पर्छन् उनीहरूको मेडिकल लागतमा सब्सिडी दिन, तर कभरेजको लागत बढ्दो रहन्छ।
औसत कटौतीयोग्य $ 4,544 हो। यसको मतलब बीमा बिरामीहरूले जेबको लगभग $००० डलर भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ बिमाले कुनै पनि मेडिकल खर्च वा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कभर गर्नु भन्दा पहिले। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
औसत प्रिमियम व्यक्तिको लागि%% र २०१ 2019 मा परिवारहरूको लागि%% बढ्यो। प्रस For्गका लागि श्रमिकको ज्याला केवल 4.4% र मुद्रास्फीति २% बृद्धि भयो। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
कसरी चिकित्सा हेरचाह लागत खर्च भइरहेको छ?
भर्खरको एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि चिकित्सा सेवाहरूले सबैभन्दा धेरै अमेरिकी खर्चमा के खर्च गर्दछ। अमेरिकामा, निम्न शर्तहरूको उपचारको लागि वार्षिक खर्च यहाँ छ:
नियमित देखभाल, संकेत, र लक्षण: $ २9 .9।। बिलियन
परिसंचरण प्रणाली रोगहरु: $ २9 .2 .२ बिलियन
Musculoskeletal प्रणाली रोगहरु: $ २१ .8। Billion अर्ब
श्वासप्रश्वास प्रणाली रोग:6१66.। अर्ब
अन्तःस्रावी प्रणाली रोगहरू: 8 १88.। अर्ब
स्नायु प्रणाली रोगहरु: $ १9 .5।। अर्ब
मानसिक रोग: $ १० .6। Billion बिलियन
गर्भावस्था सम्बन्धित उपचार: .5 .5०. billion अर्ब
स्रोत: क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१ 2019
Health 33% अमेरिकी स्वास्थ्य खर्च अस्पताल स्याहारमा जान्छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
संयुक्त राज्य अमेरिका स्वास्थ्य खर्चको २०% चिकित्सक र क्लिनिकल सेवाहरूतिर जान्छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
अमेरिकी स्वास्थ्य खर्चको १०% पर्चा औषधिहरू तिर जान्छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
अमेरिकाको मेडिकल लागत कसले भुक्तान गरिरहेको छ?
संयुक्त राज्य अमेरिका औषधिको उच्च लागतको बोझ सरकार, व्यक्ति, र व्यवसायहरूले प्रायः समान रूपमा बोक्दछ। क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन (२०१ () अनुसार:
संघीय सरकारले कुल संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य खर्चको २%% भुक्तानी गर्दछ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
व्यक्ति र परिवारहरूले कुल संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य खर्चको २%% तिर्छन्। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
निजी व्यवसायहरूले कुल अमेरिकी स्वास्थ्य खर्चको २०% तिर्छन्। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
राज्य र स्थानीय सरकारहरूले कुल संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य खर्चको १%% तिर्छन्। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
अन्य निजी संगठनहरू, जस्तै नाफारहित संस्थाले कुल संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य खर्चको%% भुक्तान गर्दछ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
औसतमा, एक परिवारको कुल स्वास्थ्य खर्चको% 37% जेब खर्चको तिर जान्छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
औसतमा, परिवारको कुल स्वास्थ्य खर्चको २%% उनीहरूको नियोक्ता-प्रायोजित स्वास्थ्य बीमाको अंशमा जान्छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
औसतमा, परिवारको कुल स्वास्थ्य खर्चको १%% पेरोल कर मार्फत मेडिकेयरलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
संयुक्त राज्य अमेरिकामा निजी स्वास्थ्य बीमा मा कुल खर्च १.२ ट्रिलियन डलर हो। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
निजी स्वास्थ्य बीमामा खर्च गरिएको कुल रकमको% 45% निजी व्यवसायहरूले कभर गरेका छन्। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
निजी स्वास्थ्य बीमामा खर्च गरिएको कुल रकमको २%% सरकार द्वारा कभर गरिएको छ (प्रायः रोजगारदाता प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाहरूको लागि योगदानको रूपमा)। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
कुल संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति खर्च १ 67 in67 मा १ $ from बाट बढेर २०१ 2017 मा १,१२4 पुगेको छ। (क्यालिफोर्निया हेल्थ केयर फाउन्डेशन, २०१))
हालसालै गरिएको एउटा अध्ययनले देखायो कि कसरी खर्च विभिन्न युगका अमेरिकीहरूमा फैलिएको छ:
अमेरिकीहरू 85 85 बर्ष वा माथि उमेरको: जनसंख्याको २% र स्वास्थ्य सेवा खर्चको%% को लागी खाता। यस उमेर समूहका एक व्यक्तिको लागि औसत वार्षिक खर्च $ 32,411 हो।
अमेरिकीहरू 65 65-8484: जनसंख्याको १२% र स्वास्थ्य सेवा खर्चको २%% को लागी खाता। यस उमेर समूहका एक व्यक्तिको लागि औसत वार्षिक खर्च $ १,,7272२ हो।
अमेरिकीहरू-45-6464: जनसंख्याको २%% र स्वास्थ्य सेवा खर्चको% 33% को लागी खाता। यस उमेर समूहका एक व्यक्तिको लागि औसत वार्षिक खर्च $,, 13१। हो।
अमेरिकी १ -4 --44 उमेर: जनसंख्याको% 35% र स्वास्थ्य सेवा खर्चको २१% को लागी खाता। यस उमेर समूहका एक व्यक्तिको लागि औसत वार्षिक खर्च $ ,,4588 हो।
अमेरिकी १ 18 र कम उमेरका: जनसंख्याको २%% र स्वास्थ्य सेवा खर्चको १२% को लागी खाता। यस उमेर समूहका एक व्यक्तिको लागि औसत वार्षिक खर्च $ 353535२ हो।
कसरी अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा खर्च अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दछ
अमेरिकीहरू मेडिकल ofणको उच्च स्तरबाट पीडित हुन सक्छन् किनकि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा हेरचाहको उच्च लागतको केही अंश। कम स्वास्थ्य उपचार लागत भएका देशहरूमा मानिसहरू चिकित्सा debtण र दिवालियापनको लागि अति संवेदनशील हुँदैनन्।
तर यो त्यस्तो होइन सबै कम मेडिकल लागत भएको देशहरूमा कम खर्चिलो छ। अन्वेषकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समान स्तरको सम्पत्ती भएका देशहरू पहिचान गरे र पत्ता लगाए कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा लागतहरू कुनै पनि भिन्नता भन्दा धेरै बढी छन्।
उदाहरण को लागी, प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य खर्च अमेरिकामा क्यानाडाभन्दा is 84. Canada% बढी छ । निम्न तथ्या .्कहरूले देखाउँदछ कि अमेरिकीहरूले अन्य देशहरूमा व्यक्तिहरूको तुलनामा सामान्य चिकित्सा प्रक्रियाको लागि कति तिर्ने गर्छ।
तपाइँ एक कान संक्रमण को लागी के प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
अमेरिकामा प्रति दिन औसत अस्पताल बस्ने लागत $ ,,२२० हो। अस्ट्रेलियामा प्रति दिन औसत अस्पताल बस्ने लागत $ 6565। हो। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
संयुक्त राज्य अमेरिकामा हार्ट बाईपास सर्जरीको लागि औसत लागत $ ,$, .१। हो। अमेरिकामा हार्ट बाईपास सर्जरीको लागी औसत लागत, २,,०59। छ। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
यु एस डाक्टरहरूले १,००० प्रत्यक्ष जन्ममा 322२२ सिजेरियन सेक्सनहरू गर्छन्। समान धनी देशहरू बीच औसत २ live4 सी-सेक्सन प्रति १०० जीवित जन्महरू। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
संयुक्त राज्य मा एक सामान्य जन्म वितरण को औसत मूल्य $ 10,808 हो। अष्ट्रेलियामा सामान्य जन्म वितरणको औसत मूल्य $ ,,3१२ हो। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
अमेरिकामा सिजेरियन सेक्सनको औसत मूल्य $ १,,१०6 हो। अष्ट्रेलियामा सी-सेक्शनको औसत मूल्य $,, ००१ हो। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
संयुक्त राज्य मा एक एमआरआई को औसत मूल्य $ 1,119 छ। अष्ट्रेलियामा एक एमआरआईको औसत मूल्य $ २१5 हो। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
अमेरिकामा एक एपेन्डक्टोमीको औसत मूल्य $ १,, 30 .० हो। यूनाइटेड किंगडममा एक एपेन्डेक्टमीको औसत मूल्य $ ,,०० is हो। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
अमेरिकामा हिप प्रतिस्थापनको औसत मूल्य $ २,, ०67। हो। युनाइटेड किंगडममा हिप प्रतिस्थापनको औसत मूल्य १$,335। छ। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
संधिशोथको उपचारको लागि प्रयोग गरिएको औषधि हुमिराको औसत मूल्य संयुक्त राज्यमा संयुक्त राज्यको तुलनामा 96%% बढी छ। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
अमेरिकामा एक सीटी स्क्यानको औसत लागत क्यानाडा ($ $)) भन्दा आठ गुणा बढी छ। (कैसर परिवार फाउण्डेशन, २०१))
२०११ को स्वास्थ्य मामिलाको अध्ययनले स्वास्थ्य व्ययलाई देशहरू बीच तुलना गरेको छ र फेला पारे कि अमेरिकामा प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च समान देशहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ।
प्रति व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वास्थ्य खर्च हो:
युनाइटेड किंगडमको तुलनामा १1१% बढी।
अष्ट्रेलियाको तुलनामा १२%% बढी।
फ्रान्सको तुलनामा १०4%।
जर्मनीको तुलनामा १०२% बढी।
स्रोत: स्वास्थ्य मामिला, २०११
अध्ययनबाट अन्य निष्कर्षमा समावेश:
संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्चको .8०.%% परिचालन हेरचाहमा छ। अमेरिकाको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकको लागि औसत वार्षिक आय $ १6,,582२ हो। (स्वास्थ्य मामिला, २०११)
औसतमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सकले क्यानाडामा प्राथमिक उपचार चिकित्सकको तुलनामा एक वर्ष, ,१,47878 कमाउँछ। (स्वास्थ्य मामिला, २०११)
एक अमेरिकी आर्थोपेडिक सर्जन को लागी औसत वार्षिक आय $ 2२२,4 .० हो। (स्वास्थ्य मामिला, २०११)
औसतमा, अमेरिकी ओर्थोपेडिक सर्जनले क्यानाडामा एउटा अर्थोपेडिक सर्जनको तुलनामा एक वर्ष $ २33,8१16 कमाउँछ। (स्वास्थ्य मामिला, २०११)
चिकित्सा लागत बढ्न जारी छ
उच्च चिकित्सा लागत स्वास्थ्य उद्योगमा प्रणालीगत मुद्दाहरूको कारणले गर्दा हो। जबसम्म यी मुद्दाहरूको समाधान हुँदैन, चिकित्सा लागतहरू बढ्नेछ।
स्वास्थ्य खर्च २०२27 सम्ममा tr ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान छ। (क्यालिफोर्निया हेल्थ केयर फाउन्डेशन, २०१ 2019)
स्वास्थ्य खर्च प्रति वर्ष .5..5% को दरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
स्वास्थ्य खर्च २०27२ सम्ममा जीडीपीको १ .4 ..4% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउन्डेशन, २०१ 2019)
मेडिकेयरमा व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य खर्च २०१ Health मा $ १२,3477 थियो र २०२27 सम्ममा १,, 464646 सम्म पुग्ने अनुमान छ। (क्यालिफोर्निया हेल्थ केयर फाउन्डेशन, २०१))
मेडिकेडमा व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य खर्च २०१ 2017 मा, ,०१13 थियो र २०२27 सम्ममा, १२,०२ reach पुग्ने आशा गरिएको छ। (क्यालिफोर्निया हेल्थ केयर फाउन्डेशन, २०१ 2019)
कर्मचारी प्रायोजित स्वास्थ्य सेवा योजनामा ​​व्यक्तिहरूका लागि स्वास्थ्य खर्च २०१ 2017 मा $,, 42 42२ थियो, र २०२27 सम्ममा,,, १77 सम्म पुग्ने आशा गरिएको छ। (क्यालिफोर्निया हेल्थ केयर फाउन्डेशन, २०१))
चिकित्सा योजनाहरूमा व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य खर्च आगामी १० बर्षमा करीव %०% बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। (क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य सेवा फाउण्डेशन, २०१))
हामी पत्रकारहरू, अन्वेषकहरू, विद्यार्थीहरू र अन्यलाई यी तथ्या share्कहरू साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। मेडिकल debtण, र उच्च लागतहरूले यसको कारण, वित्त विनाश गर्न सक्दछ। विज्ञहरूका अनुसार लागतहरू बढ्नेछ र अधिक र अधिक अमेरिकीहरूलाई debtणको जोखिममा पार्छ। हामी सबैको यस मुद्दाको गम्भीरता प्रदर्शनमा खेल्ने भूमिका छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा मेडिकल दिवालियापन, २००:: एक राष्ट्रीय अध्ययन को नतीजा , अमेरिकन जर्नल अफ मेडिसिन।
कैसर परिवार फाउंडेशन / न्यूयोर्क टाइम्स मेडिकल बिल सर्वेक्षण , कैसर परिवार फाउण्डेशन
फेडरल मार्केटप्लेस, २०१-20-20२०२० मा प्रस्ताव गरिएका योजनाहरूको लागि लागत साझेदारी , कैसर परिवार फाउण्डेशन
२०१ Emplo रोजगारदाता स्वास्थ्य लाभ सर्वेक्षण , कैसर परिवार फाउण्डेशन
अमेरिकी चिकित्सकहरूलाई दिइएका उच्च शुल्कहरू अन्य देशहरूको तुलनामा फिजिसियन सेवाहरूको लागि अधिक खर्च खर्च गर्दछन् , स्वास्थ्य मामिला
अमेरिकामा स्वास्थ्य सेवा मूल्य र प्रयोग कसरी अन्य देशहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ? , पीटरसन-कैसर स्वास्थ्य प्रणाली ट्रैकर
खर्चले हेरचाहको पहुँचलाई कसरी असर गर्छ? , पीटरसन-कैसर स्वास्थ्य प्रणाली ट्रैकर
क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य देखभाल पंचांग , क्यालिफोर्निया स्वास्थ्य देखभाल फाउण्डेशन
राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यय तथ्य पाना , राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डेटा
राष्ट्रिय स्वास्थ्य व्यय ऐतिहासिक डेटा , राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय डेटा
उपभोक्ता क्रेडिट रिपोर्टहरू: चिकित्सा र गैर-चिकित्सा संग्रहहरूको अध्ययन , उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो
यी एन्टीडिप्रेसन्टहरू सेप्टेम्बरमा सिंगलकेयरमा सबैभन्दा लोकप्रिय मेडहरू हुन्
अमेरिका मा कति मानिसहरु खाने विकार बाट ग्रस्त छन्
के यो एसिटामिनोफेन र ibuprofen सँगै लिन को लागी सुरक्षित छ
खाना भन्दा पहिले रगतमा चिनी के हुनुपर्छ?
जेब सीमा बाहिर स्वास्थ्य बीमा को लागी के मतलब छ
कम रक्त शर्करा दायरा चार्ट के हो
advil कति पटक तपाइँ यसलाई लिन सक्नुहुन्छ